Ku saabsan - Dugsiga Bartamaha Dhexe, Cambridge
Ku saabsan Dugsigeenna
Iskuulkeena waxaa la aasaasay 1996 waxaana sameeyay koox Masiixiyiin ah oo ku nool Cambridge. Waxaan ku leenahay sumcad daryeel heer sare ah fasalka gudahiisa iyo dibadiisa. Arday badan ayaa leh dugsigu waa sida qoys oo kale.
Waxaan u dhownahay dukaamada magaalada, maqaayadaha, matxafyada, kulliyadaha Jaamacadda Cambridge iyo boosteejada basaska. Waxaan ku dhegannahay deris dhow kaniisad qurux badan oo dhagax ah.
Ujeedadayadu waa inaan ku siino soo dhawayn diiran iyo fursad aad u fiican oo aad ku barato Ingiriisiga jawi daryeel leh, saaxiibtinimo leh. Koorsooyinkayagu waxay soconayaan sanadka oo dhan waxaadna bilaabi kartaa toddobaad kasta. Waxaan sidoo kale bixinaa diyaarinta imtixaanka. Waxaan kaliya barnaa dadka waaweyn (laga bilaabo da'da ugu yar ee 18).
Ardayda ka kala socota in ka badan 90 dal oo kala duwan ayaa wax nala bartay oo badiyaa waxaa jira isku dhaf wanaagsan oo jinsiyado iyo xirfado iskuulka ah. Dhammaan macallimiintu waa kuwa ku hadla afka hooyo waxayna u qalmaan CELTA ama DELTA.
Waxaan ku maareyneynaa iskuulka sida ku cad Dowladda UK iyo hagidda Ingiriiska Ingiriiska, annagoo qaadeyno taxaddar kasta oo lagama maarmaan ah si looga fogaado faafitaanka Covid-19.
Tdugsigu waa Hay'ad samafal ah oo diiwaangashan (Reg No 1056074) oo ay la socdaan guddi Ammaano oo ku shaqeeya awood la-talin. Agaasimaha Daraasaadka iyo Maamulaha Sare ayaa mas'uul ka ah socodsiinta hawl maalmeedka dugsiga.
Aqoonsiga Golaha Ingiriiska
'Golaha Ingiriisku wuu kormeeray oo la aqoonsan yahay Dugsiga Dhexe ee Dugsiga Dhexe ee Cambridge bishii April 2017. Qorshaha Aqoonsiga wuxuu qiimeeyaa heerarka maamulka, khayraadka iyo dhismaha, baridda, samafalka, iyo hay'adaha aqoonsiga ee buuxiya heerarka guud ee goob kasta oo la baaray (arag www.britishcouncil.org/education/accreditation wixii faahfaahin ah).
Iskuulkan luuqadaha gaarka ah wuxuu bixiyaa koorsooyin Ingiriisi guud oo loogu talagalay dadka waaweyn (18 +).
Awoodaha ayaa lagu xusay aagagga hubinta tayada, maamulka tacliinta, daryeelka ardayda, iyo fursadaha firaaqada.
Warbixinta kormeerka ayaa ku qeexday in ururku ka soo baxay heerarka qorshaha '.
Baadhitaanka soo socda ayaa la filayaa in 2022
Ku saabsan Cambridge
Cambridge waxay caan ku tahay aduunka oo dhan Jaamacadeeda, taariikhdeeda, quruxdeeda, heerkeeda tacliimeed iyo nolosha ardayda. Booqo kuliyadaha iyo...	Read More
Ballanqaadka Dugsiga Dhexe ee Luqadda ayaa kaa caawin doona inaad sida ugu fiican uga faa'iideysato waqtigaaga Cambridge, adoo ku raaxeysta...	Read More
Waa kuwan qaar ka mid ah waxqabadyada aan inta badan ku darno, in kastoo xilligan ay ku tiirsan yihiin xayiraadaha Covid-19, ee ku saabsan...	Read More
Soo qaado buug-yaraheena
Eeg buug-yaraheena - riix si aad u soo dejiso